Home Wararka Uhuru oo sheegay in ciidanka Kenya gacan weyn ka geysteen xasilinta Soomaaliya
Uhuru oo sheegay in ciidanka Kenya gacan weyn ka geysteen xasilinta Soomaaliya
Madaxweynaha Dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in weeradii argagaxisada ay ka geysan jireen soohdinta Somalia iyo Kenya uu si weyn hoos ugu dhacday tan iyo markii Kenya ay howlgal milateri ka billowday Soomaaliya 10 sano ka hor.
Ciidamada Kenya ayaa soo galay Soomaaliya Oktoobar 14, 2011 iyaga oo ka jawaabaya weerarro uga yimid kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, kuwaas oo afduubyo iyo weerarro isdaba joog ah ka geystay meelo kala duwan oo dalkaasi Kenya ah ah gaar ahaan magaalooyinka dhaca dhinaca.
Isagoo ka hadlayay Sabtidii intii lagu jiray xuska sannad -guurada 10 -aad ee ciidamo Kenya ah soo galaan Soomaaliya oo lagu qabtay Kahawa Garrison, waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ay gacan weyn ka geysteen xasilloonida gobolka iyagoo ka qeyb qaatay howlo kala duwan oo nabad ilaalin ah.
“Ciidamadeenu waxa ay awood u yesheen inay ka hortakagaan oo ay xakameeyaan weeraradii ay Al-shabab kusoo qaadi jireeen xuduuda iyo Magaalooyinka xeebta dhaca”ayuu yiri Kenyatta.
Kenyatta ayaa xusay in ciidamadiisu ay sii wadi doonaan Howlgalka ka dhanka ah dhaq dhaqaaqa al-shabab waxa uu xusay in ay jiraan askar iyagoo difaaca amniga Kenya ku nafwaayay Soomaaliya.
Maanta 10sano ayaa u buuxsantay ciidamada Kenya oo iyagu ka howlgala intoodi badan degaanada Maamulka Jubaland.